သတ္တုလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်သေတ္တာ features တွေ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်ခြင်းသတ္တုသိုလှောင်ပစ္စည်းသတ္တုကွန်တိန်နာ,ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း,Pallet,ထိန်သိမ်း,roll ကွန်တိန်နာ etc
နေအိမ် » သတ္တုလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်သေတ္တာ features တွေ
သတ္တုလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်သေတ္တာ features တွေ
Metal boxes are also called metal turnover boxes and steel turnover boxes. The structure is similar to storage cages and is divided into fixed and folded. Metal box is mainly used for storage and turnover of goods. Its environmental protection, moisture, ချေးခုခံ, beauty and durability are widely used in hardware machinery, အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ, light industrial textiles, electronic appliances and other industries.
သတ္တုလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်သေတ္တာ features တွေ:
1. Environmental protection, moisture, ချေးခုခံ, beautiful and durable
Scope of application: metal-sealed box is resistant to acid, alkali and oil, safe and harmless, and has good sealing performance. It is suitable for storage, transportation and circulation of goods in factory production workshops and warehouse storage. It is widely used in hardware machinery. Automobile manufacturing, အီလက်ထရောနစ်ကရိယာ, food processing and other industries.
If you want to know more about metal cage, သတ္တုလှောင်အိမ်စင်ပေါ်, etc., သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျ.
post ကိုအချိန်: 2019-08-19